Bluetooth Keyboard ho an'ny iPad Logitech Tablet Keyboard Review | Vaovao IPhone
El Logitech Tablet Keyboard ho an'ny iPad dia fitaovana tsara ho antsika izay mampiasa iPad ho an'ny lahasa fanoratana. Ny keyboard an'ny iPad dia tena tsara, tsy misy isalasalana izany, fa rehefa mila manoratra mailaka lava na lahatsoratra bilaogy aho dia tsy misy zavatra toa ny fanaovana azy amin'ny klavie fizika. Betsaka ireo kitendry azo alaina ara-barotra, Ny ankamaroan'izy ireo tafiditra ao anaty fonony, zavatra toa manahirana ahy kokoa noho ny tombony, noho ny fampiasana izay omeko ny iPad Mini-ko. Aleoko ny mitondra azy amin'ny Smart Cover ary mampiasa ny keyboard fotsiny rehefa ilako izany.
Ny Logitech Tablet Keyboard dia manana tombony ihany koa amin'ny maha-fitendry feno, habe mitovy amin'ny klavier mahazatra, ary amin'ny Espaniola, zavatra sarotra hita ao amin'ny fitendry izay amidy amin'ny Internet. Ny layout manan-danja dia mitovy amin'ny fitendry Mac rehetra, miaraka amin'ny bokotra cmd sy alt mahazatra. Ho fanampin'izany, amin'ny endriny mahafinaritra dia tena mampatsiahy ny keyboard bluetooth an'ny Apple, na ny endrik'ireo fitendry na ny endrik'ireo fanalahidy. Tena tsara ny fikasihana, mahazo aina tsara ny mitendry ary tonga lafatra ny valiny.
Ahitana fonony, izay tsy manarona azy manontolo, ary manampy amin'ny fitaterana azy tsara. Tsy azoko tsara hoe maninona no tsy tranga feno io, fa tsy heveriko ho zava-dehibe loatra koa. Ny fonony dia misy famaranana toa ny hoditra, malefaka kely, ary tsy tokony hatahotra ianao hoe hifandray amin'ireo iPad-nao miaraka aminy, satria malefaka be izy io. Volvety, loko manga ny ao anatiny, ary tsy manana mekanika hitazonana ny klavier raha vao tafiditra ao, izany hoe latsaka ny tabilao raha apetrakao ambony ambany.
Ity tranga ity koa dia mijoro ho toy ny fijoroana ho an'ny iPad, izay azo tohanana eo amboniny noho ny fijoroana manga kely izay azo aforitra rehefa tsy ampiasaina. Ny tranga rehetra-iPad dia tsy marin-toerana, tena. Raha mikasika ny iPad ianao raha manindry bokotra rehetra, dia tsy sarotra ny hihetsika ny tranga, na dia tsy milatsaka aza izany. Ity fanohanana ity dia tsy mandresy lahatra ahy hampiasa ny iPad, aleoko mampiasa azy amin'ny Smart Cover, milamina sy azo antoka kokoa izy io.
Andao hametraka ny tranga ary hiverina amin'ny klavier. Ny famaranana dia plastika, miaraka amin'ny sisiny amin'ny plastika fotsy, fa tsara kosa ny fiafarany. Vita tsara sy milamina izy io rehefa apetraka eo ambony latabatra, ka tsy ho hitanao ny fihetsiketsehana rehefa manoratra ianao. Ny fampifandraisana azy amin'ny iPad dia tsotra dia tsotra, mila manodina azy fotsiny ianao, tsindrio ny bokotra eo ambaniny hampifandray azy ary hahitanao azy avy amin'ny fikirana iPad. Tsy maintsy manoratra isa amin'ny kitendry ara-batana ianao ary manindry Enter, dia izay.
Manana fanalahidy fiasa maro izy io, mba hidirana mivantana amin'ny fanaraha-maso ny volume, playback, ny galeri-tsary ary hanidy ny fitaovana mihitsy aza. Eo ankavanan'ny farany izy dia manana bokotra Home izay rehefa manindry ianao dia toy ny hoe manindry ny bokotra Home amin'ny iPad-nao ianao. Ankoatr'izay, toy ny rehefa ampifandraisina ny kitendry dia tsy hiseho eo amin'ny efijery ny kitendry iPad, manana bokotra izy hanehoana azy, mba hampidirina ireo sary emoji ho an'ny lahatsoratrao, ohatra.
Ny fanoratana dia toy ny amin'ny klavian'ny solosaina rehetra, manaiky tanteraka ny baiko rehetra, ny lantom-peo, ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny bokotra horonan-taratasy ... Ny fahatsapana dia mitovy amin'ny hoe manoratra amin'ny solosaina ianao. Marina fa misy ny rindranasa sasany tsy manaiky accents, ohatra, saingy olan'ny rindrambaiko kokoa noho ny keyboard ihany, satria amin'ny hafa dia miasa tanteraka izy ireo.
Ny takelaka dia miasa miaraka amin'ny bateria AAA roa, ary manana bokotra on / off, noho izany dia tsy mandany angovo tsy ilaina. Izy io koa dia manana mari-pamantarana bateria sy Bluetooth. Manodidina ny 50 € ny vidiny, vidiny izay tsy ratsy mihitsy raha ampitahaintsika amin'ny kitendry hafa misy eny an-tsena. Raha mitady keyboard Espaniôla ianao, amin'ny habe mahazatra, mahazo aina amin'ny fanoratana, ary tsy te-hametraka ny iPad-nao ao anaty tranga iray isaky ny te hampiasa azy ianao, heveriko fa mihoatra ny safidy tsara.
Fanazavana fanampiny - Logitech K760, fitendry keyboard tonga lafatra ho an'ny iPad, Logitech dia mandefa ny trangam-panoratana Bluetooth Powered Solar voalohany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Kitendry Tabitech Logitech: keyboard Bluetooth ho an'ny iPad anao
Salama! fantatrao ve raha mety mifanaraka amin'ny sony takelaka sony? Misaotra anao
Amin'ny ankapobeny dia keyboard bluetooth izy ity, noho izany dia tsy tokony hanome anao olana izany, afa-tsy ireo lakilen'ny fiasa izay miahiahy mafy ahy sao hahomby izy ireo. Tsy afaka milaza aminao marina aho, satria milaza ny forongon-tsofina fa ho an'ny iPad izany.
Takelaka ho an'ny ankizy dia hoy izy:
Mifanaraka amin'ny takelaka Clan ve izy io?
Mamaly takelaka ho an'ny ankizy
Tsy afaka manome toky anao aho satria iPad ihany no mamaritra azy. Fa raha ny tokony ho izy dia tokony raha mbola mifanaraka amin'ny kitendry Bluetooth ilay takelaka.
Tamin'ny 13/12/2012, tamin'ny 16:30 PM, Disqus nanoratra:
Poll of the Week: Voaporofo ve ny iPhone 5 anao?